Tilmaamni laakkofsa ummata dangaa Oromiyaa fi Somaalee irraa .. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTilmaamni laakkofsa ummata dangaa Oromiyaa fi Somaalee irraa ..
Tilmaamni laakkofsa ummata dangaa Oromiyaa fi Somaalee irraa buqqa’ee Godina #Baalee ji’a sadi dura turefi amma gabaafamaa jiru kan keessa beektonni garagaraa naaf qodan kana fakkaata.
Ji’oota sadan darbe tattaffiin buqqaatota gara qe’ee isaanitti deebisu godhamee ture. Haa ta’uutii hamma laakkofsa asi irratti gabaafame kana hin ta’u jedhu. Waajjirri Dhimmoota Kominikeeshinii Godinichaas odeeffannoo jiru ummataaf hiruu qaba.
Hub: Dabalataan Aanaa Barbaree buqqaatonni kuma kudhan ta’an kan sababa biraatiin buqqa’an akka jiraniif hunda caalaa daran rakkachaa akka jiran odeeffadhe.
via Nuredin Luke